Ngathi | Taizhou Bendi Valve Co., Ltd.
Taizhou Bendi Valve Co., Ltd.esekwe ngo-1988. Ifunyanwa kwisiseko esikhulu sokuthumela kumazwe angaphandle iinxalenye zezinto ezizenzekelayo kunye nezixhobo kumava e-Yuhuan. IBendi lishishini lobuchwephesha obuphezulu kwiphondo eliphumelele ngempumelelo i-ISO9001: 2000 kunye ne-ISO / TS16949: isiQinisekiso seNkqubo yoMgangatho weHlabathi ka-2009.
Iimveliso zethu zigubungela amashumi amazwe kunye nemimandla, enje nge: South America, North America, Europe and Asia, also we have OEM with Russia engine Valve Company and OEM OEM Company.
Sisebenzisa inkqubo esemgangathweni kunye nolawulo kunye nobuchwepheshe obuphambili bokuvelisa. Ukusika iteknoloji, izixhobo eziphambili, amava atyebileyo kunye nolawulo lwale mihla zenza izibonelelo zethu ezibalaseleyo kwaye sibe sisiqinisekiso esomeleleyo sokuveliswa kweemveliso zevalve ezisemgangathweni.
Singolunye lweempawu ezaziwayo kwimoto yaseTshayina emva kwentengiso. Besisoloko sisebenza kumzi mveliso we-aftermarket kwihlabathi liphela ngaphezulu kweminyaka engama-20 kwaye sivelisa ngaphezulu kwe-5 yezigidi zevalvu zenjini minyaka le. Sinokuphuhlisa kwaye sivelise iimveliso ezintsha ngokweemfuno zabathengi, kwaye siqiniseke ngokunzulu umgangatho weesampulu / imizobo ethengiweyo kubathengi. Sikwanelebhu yolawulo lomgangatho ophezulu exhotyiswe ngezixhobo zokuhlola kunye nokuvavanya kunye nezixhobo.
Kukhuphiswano olunobukrakra lweemarike, iBENDI ihlala inyanzelisa ukuphumelela abathengi ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu, ubuchwephesha obuphezulu kunye nenkonzo ekumgangatho ophezulu. Sinalo lonke uthungelwano lokuthengisa, senza inkqubo yenkonzo ebanzi negqibeleleyo, ukuze abathengi bakwazi ukufumana uthethathethwano kunye nenkonzo okokuqala. Sakha ukuthembana kwaye siyahambelana nayo yonke imimiselo yangaphakathi nangaphandle yolawulo kunye nomgangatho ngokubonelela ngeemveliso kunye neenkonzo ezihlangabezana nokulindelweyo kukhetho lwabathengi. Wonke umntu kwinkampani yethu uyifumana engenasiphene kwaye kungekho nkunkuma. Ulawulo lomgangatho wenkampani ngokubanzi ukuya kwingxelo evela kubathengi.
Umbono we-BENDI uthi: "Ukuze ube ngowona Mvelisi weValve yeeNjini eziBalaseleyo eMhlabeni."
Inombolo 11, Jingfeng Road, At Qimo Industrial Zone, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang, PRChina